Iivenkile kunye neetanki eziphezulu → Iimpahla zokusebenza • I-P & M yekhompyutha
Iyasebenza kwaye ilungele kamizelki sisisombululo esifanelekileyo kuwo onke amaxesha onyaka. Ukungahambelani kwabo kuyabavumela ukuba badityaniswe kunye iihafu Ehlotyeni kwaye iihempe ebusika. Siyakunika ivesti zomsebenzi yaye iivenkile ezilumkisayo ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu.
Engenamikhono bonelela ngobushushu, unike inkululeko yokuhamba, kwaye enkosi kwiipokotho ezisebenzayo, zikuvumela ukuba uthathe izinto eziyimfuneko. Ezi zinto ziyenzayo zenza isinxibo sixatyiswe ngabasebenzisi beenkampani ezininzi kunye namaziko.
Sinikezela ngemodeli ebanzi evela ku-Adler, Stedman, Reis yaye ILeber kunye neHollman. Uluhlu olubanzi lwemibala, ubungakanani kunye neepropathi ezininzi zenza ukusetyenziswa kweevesti njengezinto zokunxiba, kodwa kwaneempahla zabucala.
Ukulungiswa kunye nabasebenzi bokwakha, sicebisa ivesti eneepokotho ezininzi, ngakumbi ziluncedo ekugcineni izinto ezincinci. Iimpahla zigcina ukuhlala kwazo ixesha elide ngenxa yokusebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu.
Iimveliso zenziwe, phakathi kwabanye ezenziwe ngomqhaphu kunye nepolyester, ezinye zikwanazo nolunye uhlengahlengiso. Kubantu abasebenza kwiimeko eziyingozi, sinika iivesti zokhuseleko kwimibala elumkisayo enezinto ezibonakalisayo.
Izilumkiso ezi zizambatho zokhuselo ezizodwa ezonyusa ukubonakala. Ukongeza, iiteyiphu ezibonakalisiweyo ezithungileyo zikhokelela ekubonakaleni okungcono ngakumbi kwiimeko zemozulu ezinzima. Iivenkile zisetyenziswa ngokubanzi phakathi kwabasebenzi bezandla, abameli beenkonzo zendlela, kodwa naphakathi kwabathandi bezemidlalo, abathathi-nxaxheba kumngcelele, abakhenkethi, nabantwana besikolo nolutsha.
Iimveliso zethu ziyahlangabezana nayo yonke imigangatho esemthethweni efunekayo. Xa ukhetha ivesti, kubalulekile ukuba uyihlengahlengise ngokufanelekileyo kubude bakho, njengoko imitya ebonakalisayo kufuneka ikwinqanaba lesibane seemoto. Ukulunga okungalunganga kuya kukhokelela ekusebenzeni kancinci ngenxa yokutshintsha kwezinto ezibonakalayo.
Amanqanaba okubonakala kweefestile alawulwa ngumgangatho we-EU we-EN 471: 2003, owahlula amanqanaba amathathu okubonakala:
1, ngezinga eliphantsi lokubonakala, lisetyenziswa kuphela ekugcaceni kwendlela,
2, ngenqanaba eliphakathi kokubonakala, ukuhlangabezana neemfuno zempahla yokukhusela,
3, eyona nto ibonakalayo yokubonakala enemigca emininzi ebonakalayo enobubanzi obuncinci be-5 cm.
Kwiivenkile zethu, sinikezela ngeempahla ezikumgangatho ophezulu ezikumgangatho ophezulu ezilungele ukusetyenziswa emsebenzini.
Si umphezulu wetanki iinkampani ezinje ngeAdler kunye neLeber kunye neHollman.
Sinikezela ngeemodeli zomoya ezinikezelwe ikakhulu entwasahlobo nasehlotyeni kunye neemodeli zokugquma eziza kusetyenziswa ekwindla nasebusika.
Kuxhomekeka kwisitayile, unokukhetha iinguqulelo ezineepokotho ezininzi zokuququzelela umsebenzi, umzekelo, izixhobo zokulungisa izixhobo zombane. Iitanki eziphezulu zilungele imisebenzi yemihla ngemihla, zinceda ukugcina kushushu. Imibala ekhoyo, kubandakanya ikhamamo, ikuvumela ukuba uhlengahlengise iimeko kunye nezinto ozikhethayo, o.k.t.amahlathi okanye abalobi.
Iitanki ezingaphezulu zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ubukhulu becala zinomaleko ongaphandle wepholesteri ekhusela umoya okanye imvula. Iimodeli ezininzi zineekhola ezimileyo zokukhusela ngcono kubanda.
Ukwenza ubuntu bube nodumo olukhulu
Abathengi abaninzi bayayixabisa ubuntu obuthile kunye nobuquNgokukodwa ukuba abasebenzi benza umsebenzi wokumela abafowunelwa nabo banokubakho kwiikhontrakthi nakubathengi.
Engenamikhono ngokuprinta lukhetho oluqhelekileyo lokumakisha iimpahla. Ngale nto engqondweni, cinga indlela ekumgangatho ophezulu yokushicilela enganyangekiyo kumonakalo, ukulahleka kombala kunye nokuhlamba okuphezulu kobushushu. Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba kwenziwe ubuqu obuqinileyo isambatho sekhompyuter. Siyakumema ukuba undwendwele ivenkile yethu ekwi-intanethi www.pm.com.pl okanye kwiAllegro "PRODUCER-BHP".
iitanki eziphezulu zomsebenziivesti zomsebenziIitanki eziphezulu kunye nelogoiitanki eziphezulu kunye nokuprintaivesti zomsebenzi wabasetyhiniIivesti zendlelaiimpahla zomsebenzi zamadodaiivesti zokukhuselaivesti yomsebenzi egqunyiweyo yamadodaivesti yomsebenzi egqunyiweyoivesti yomsebenzi egqunyiweyo yamadodaIivesti zomsebenzi ezibonakalisaivesti zomsebenziUmsebenzi iivenkile AllegroIvesti zasehlotyeni zokusebenzaivesti yomsebenzi egqunyiweyoIivesti zomsebenzi ezibonakalisaUmsebenzi iivenkile olxUmsebenzi usebenza ngeprintIvesti zasebusikaivesti zomsebenziUmsebenzi iimpahla zokunxiba
5 / 5 ( 10 iivoti )